I-GPS yeMephu yeMephu eyi-6, Thatha idatha-iGeofumadas
Ikhaya/cadastre/GPS Mobile Mapper 6, Capture Data
cadastreGPS / IzixhoboTopography
El Imephu yeMapper 6 isizukulwana esifike endaweni yeCX kunye ngalinye, eyayikade iveliswa nguMagellan. Namhlanje siza kubona indlela yokufaka idatha ebaleni.
1 Uqwalaselo oluyisiseko
Ukufakela idatha, ikhompyutha kufuneka ibe neprojekthi efakwe Imephu yeMephu, ezayo kunye neediski xa kuthengwa izixhobo kwaye ifakwe nge-intanethi Ukuvumelanisa okusebenzayo. (Qaphela, musa ukudibanisa nayo Ifowuni yeMapper Office)
Ukufezekisa, kwenziwa Ikhaya> Imephu eselfowuni. Imbono yokuhamba imbonakalo, xa uyilayisha okokuqala iipameters kufuneka ziqwalaselwe kwikhotho imenyu kwicandelo eliphantsi elincinane.
U bhaliso: Apha kuya kufuneka uqinisekise ukuba sifuna ukuba irekhode ngokuzenzekelayo indawo rhoqo. Umzekelo, qho emva kwemizuzwana engama-30.
Singayichaza ukuba ithathe ngokuzenzekelayo yonke imitha ethile yokufuduka. Oku kufanelekile kwiindlela.
Kunokuthiwa ithathwa ngesandla, xa ndiyikhetha. Kwaye oku, kufuneka kuboniswe apha ngasentla, ukuba izithuba ezingakanani ukuya kumndilili, oko kuthetha ukuba xa ndibonisa imizuzwana engama-45, izixhobo ziya kuqokelela idatha ngelo xesha kwaye ziya kubamba ixabiso eli-avareji.
Units. Apha kuyasungulwa ukuba siza kusebenza kwiimitha, iikhilomitha, iimayile, iinyawo njl. ngokufanayo kwindawo.
Kukho ezinye iiparitha, ngokuba ngoku siza kuchaza kuphela ezo.
2. Yakha imephu entsha
Ngenxa yoko, kwenziwa Imenyu> entsha ... Kubalulekile ukuqonda indlela i-Mobile Mapper esebenzayo ngayo, ukwazi apho idatha igcinwa khona.
Ifayileimephu. Olu luhlobo lwesikhongozeli, njengoko kunjalo ngeArcView .apr, iArcGIS .mxd. Ayinayo idatha, kuseto lolungelelwaniso kuphela. Kuya kufuneka ukhankanye igama kwaye lizakugcinwa phi.
Ifayile ye .shp. Esi sixhobo sivumela ukudala umaleko wohlobo lwefayile, apho kugcinwa khona ulwazi olufakiweyo. Xa yenziwe, iifayile ze-.dbf kunye .shx nazo ziyenziwa.
Oku kwenziwa Imenyu> iileya, kwaye apho unokukhetha umaleko okhoyo, okanye omtsha. Olu luhlu lunokuba lolomgca, inqaku okanye uhlobo lwepoligoni, 2D okanye 3D. Emva koko iimpawu zinokuba zezombhalo wohlobo, amanani, ewe / hayi, umhla, umfanekiso okanye isandi esifakwe kwizixhobo ezifanayo.
Yiyo loo nto unokwenza izendlalelo ezinje ngezi: Izakhiwo, iiasi zesitalato, iindawo zolawulo, umthi, njl.
Uluhlu ngalunye lunokuba neempawu ezigcinwe kwi .dbf, njenge: umnikazi, ifoto, inombolo yendlu, isimemezelo somsindo, njl njl.
Kwakhona ubonise iimpawu, ezifana nesimboli, umbala, ubukhulu, gcwalisa.
Uluhlu ngalunye lunokubonisa isikali. Umzekelo, ukuba ndibeka umda womda kamasipala ku-1: 10,000, andizukuyibona ngaphandle kokuba inyuswe ngaphezulu kwayo kwaye ayizukuhamba xa ndisebenza neepasile ezikalini eziyi-1: 400.
Unokufaka kwakhona umaleko okhoyo, njengepropathi okanye imephu yendlela. Isenokuba ngumfanekiso othunyelweyo.
Iifayile ze .grw kunye .crg. Ezi zenziwe njengoko sithatha amanqaku, kwaye ziyimfuneko ukuze ethubeni lenze ukuqhubekeka emva kokusekwa kwidatha efunyenwe kunye nezinye izixhobo ze-tuli. Idatha ngaphandle kokucwangciswa kweposi iya kuhamba kwi-radius ye-3 ukuya kwi-5 yeemitha-ngathi naluphi na umkhangeliUkuchaneka kwee-subtitric kufezekiswa emva kokusebenza.
Isilumkiso: Imephu yeMephu eyi-6 (MM6) ayinakuba sisiseko (ukuza kuthi ga ngoku). Banokusekela isiseko esidala Ifowuni yeMap Pro, ndicinga ukuba iCX kunye I-Magellan Promark 3 (Le nto ibiza nge-US $ 2,500 ngelixa i-MM6 iya ngaphantsi kwe-$ 1,500, malunga nokuba iP Pro okanye i-CX ifaneleke)
Kuthetha ukuba kwinkqubo eninzi, unokufumana Promark3 kunye ne-5 MM6, malunga ne-US $ 10,000. Mhlawumbi isisombululo esingenakuthelekiswa nanto ukuba sithelekisa amaxabiso neempawu ezinje nge Ukuqhawula.
Kuya kufuneka kwakhona ukuseta ukucwangciswa kunye nokulungelelanisa inkqubo okokuqala isalathisi ilayishiwe.
3. Thatha idatha
Emva kokuba kwenziwe ngentla apha, i-GPS iqala kwaye siya kuba neefestile efana neyoboniswa kumfanekiso.
Inombolo yeesatelliti ezibonakalayo iboniswe ngasentla, ulungelelaniso luboniswe ngezantsi, kunye nendawo kumbukeli.
Ukubamba idatha, kukhethwe kwimenyu ephantsi, kwicala lasekhohlo, apho lithetha khona Ngena. Ukuba sinayo ngeSpanish iya kuthi ukubhalisa. Ngokukhawuleza isivumela ukuba sikhethe ukuba loluphi uluhlu esiza kulugcina inqaku eliza kufakwa, kwaye ukuba siyilungiselele ngesandla, njengoko bendichazile kwinyathelo lokuqala, ngoko ibha yokuhamba phambili iya kwenza inkqubo ngexesha lomgca wemizuzu kuze kube yinqaku.
Emva koko iphaneli iyavula ukufaka iimpawu. Ukuba unolunye uqwalaselo, olunjengazo zonke iimitha ezili-10, sinokushiya izixhobo kwideshibhodi yemoto kunye nokuqhuba, iya kwenza ukubanjwa ngalo lonke ixesha ifumanisa ukufuduka kweemitha ezili-10.
Kwisithuba esilandelayo siya kubona indlela yokukhuphela idatha kunye emva kwazo.
Imizuzwana engama-37.5 yokumanga kwakho kokugqibela
Ukujonga kwi-ArcGIS 10
INkosi kwiiGeometri zoMthetho.
I-Vexel isungula i-UltraCam Osprey 4.1
Ikhowudi ye-Post-process ithengwa. Ayizi neGPS; ngoko ke oyena mntu unokukunika loo khowudi ngumntu okuthengisele yona, ukuba ufuna ukukunika.
kuhle kusasa ndinee-GPS ezimbini endithengiswe ngumhlobo wam kodwa andinayo ikhowudi yokuvula umsebenzi obonakalayo, zinokundinceda ekufumaneni okanye kwindlela yokusebenza kwe-postrocess
Yadira Prieto uthi:
Mhlobo sele ndiyile kwiphepha apho uthi isoftware ikhona kodwa ithi ayikho kwaye uhlaziyo lolwemephu yeselula 6.0
UCarlos Sarango uthi:
Andiyazi ukuba ungangena njani ulungelelaniso kwi-10 imephu yomnxeba ukuba umntu unokunceda
ULeonardo Zapata uthi:
Hi Ndingayifumana MM6 andinako ukujika, kwaye bazama ukunxibelelana iinombolo zefowuni ngaphandle impumelelo, ndingathanda kundinceda ukuba isebenze ukusuka 2010 ubugcine iqela anekhowudi lokuvula ezahlukeneyo azisebenzi. I kakhulu uncedo lwakho ukubeka umsebenzi.
jhon fredy baron uthi:
hello snores I need to collaborate I-6 imephu yeselula Andiyazi indlela yokuyiqwalasela ukuba idibeneyo idilesi apha eColombia
ME akwazi ukwenza Khawundixelele ukuba asenini Ndingafumanisa Accessories GPS MobileMapper 6, Mna ndingoka-Chiapas, Mexico, mna KUFUNEKA evenkileni kufutshane KAKHULU TOPOGRAFIA wahlala APHO okithenga. Kwangaphambili enkosi ulwazi lwakho ulindele impendulo ekhawulezileyo.
Roque Moran uthi:
Ndiza kufumana i-GPS Ashtech Mobile Mapper 10 Post-PROCESS Precision ye-0.5 Meters Post-Process Code kwaye umnikezeli undixelela ukuba benza i-GPS Tuning Complete Installation kunye noLungiselelo lwe-SUITE MM. Kwaye ukuba banokwenza i-SETUP yezixhobo kwaye ineendleko ezongezelelweyo ze-995 pesos. Umbuzo ngowokuba kuyandifanela ukuba benze ulungelelwaniso oluyimfuneko kwaye bahlawule le mali okanye ndingazenza ngaphandle kobunzima obungaka?
ARTURO TEMOLOLI uthi:
Molo mholo bendicela ubuza NJANI I wakhupheleni INTERNET MY Mibile Mapper-6 KUNYE INDLELA YOKWENZA GOOGLE UMHLABA imitha okanye PROGAMAR iqela wam WEEMITHA DIGITAL MAP
jorge e tarazona v uthi:
imbeko. Ndinemephu ephathwayo 6, ungandixelela phi okanye njani amanyathelo enkqubo yangemva, enkosi
ukusuka bucaramanga colombia. mbulela
Hector Ramos uthi:
Sawu, ndingathanda ukwazi ukuba ukhona unokunceda ukuba ndiqalise kwaye ndiqalise i-mapmaker yeselula ye-6.
Disemba, 2011 kwi
Ukusuka apha ungalanda isofthiwe ye-MobileMapper 6
ingelosi ye-luis igolide uthi:
Hayi, ndivela eMexico, kwaye bandinika i-6 mapper ephathekayo, kwi-laptop yami ndinemifestile ye-7, kwaye andinakukwazi ukufaka iiprogram ze-GPS, umntu angandisekela ngeenkqubo zaloo nguqulo yeefestile ???
Iifayile ze .map aziqukethe idatha, kodwa zibhekisela kwiifayili ze - .shp eziqulethe ulwazi oluthunjiweyo.
Kufuneka ukhuphele iifayile ezintathu: .shp .dbf kunye .shx kwikhompyutha yakho. Ezi ziifayile eziqhelekileyo, nayiphi na inkqubo ye-GIS inokuzivula kwaye ithumele ngaphandle kwi-dxf ukuzivula kwi-AutoCAD.
I-Ashtech ifowuni yeMapper Office
Microstation XM okanye ngaphezulu
Sawubona, unokundinceda njani ngokuthetha indlela yokuthumela iifayile .map kwi-mobilemapper ofisi ukuze ivule kwi-Autocad 2010 .. sibonga
Nceda umntu andixelele, ndenza ulungiso lokwahlula kwaye ndifumana impazamo ethi: "Ifayile xxxx.grw ii-vectors azihambelani kwimephu" into enjalo, loo mpazamo sele iza kaninzi kwaye iyandikhathaza. kuba kukhangeleka ngathi ukulungiswa kwenziwa kodwa andazi ukuba idatha ithembekile na ngenxa yomyalezo ophumayo” ukuba kukho umntu onokundinceda, enkosi.
Ngelo xabiso, nangawuphi na umsasazi weAshtech kwilizwe lakho. Ngaphantsi kwe-eBay.
I-post-processing yinto yobomi, ingadluliselwa kwiqela elinye ukuya kwelinye.
Jon Leisure uthi:
Sawubona, ungandixelela apho ndingayithenga le GPS ngezantsi kwe-euro ye-1000 kunoma iyiphi ivenkile evumela ukuba ingenise eSpeyin? Ukuba kunokwenzeka kuloo xabiso, ngaba iquka intengo yeposi emva kwexabiso? Ngaba i-post-processing ahlala kuyo okanye kufuneka ihlaziywe?
ukusetha ikhampasi kulula, kufuneka ulandele amanyathelo
ubeke GPS endaweni caba xa wena ukuba uyenze isalathisi yekhampasi Bamba sokukhomba CPS emantla kokutshintsha kwicala malunga ejika isalathisi aparase sakujika labrujula
Ndiyabona umbuzo wam ngolu hlobo lulandelayo Ndine 3 gps mobilemapper6 kwaye ndifuna ukwazi indlela endinokuyifumana ngayo enye isindisa umfuphi isikhundla sesinye sezakhono zangexesha langempela njengokujonga
Ndifuna ukwazi indlela okufezekiswe ngayo kwaye oko ndifuna ukukwenza
Ukubingelela kuyo yonke imibuzo yam:
Ndine 3 gps 6 mobilemapper kwaye ndifuna ukwazi nendlela endiyidingayo ukufumana enye kunye nezinye
Ndiyichaza ukuba ndine-briadi i-baria iqokelela idatha ye-cartographic in movement kwaye ndingathanda ukubona indawo yabo ngexesha elithile okanye lifumane
Apho unakho kwiinketho, ukwenzela ukuba ungayilungisa ikhampasi, emva kokuba uyisebenze kufuneka uguqule i-GPS kwiqonga elincinci, ngokulandela ukhokelo olucelayo.
Ndiyaqonda ukuba kwi-geotag zezithombe, kufuneka udale kwimoya yolu hlobo lwefayile, ngoko ke xa ubamba idatha iya kukucela ukuba uthathe umfanekiso.
Albeiro Marin uthi:
Mna, ndihlala eColombia; Ndine-MobileMapper 6, andizange ndikwazi ukuqwalasela i-E-compass, okanye i-geo-ifake umfanekiso owenziwe nayo, yenziwa njani? Ndiyabonga kakhulu ngoncedo lwakho.
Ndiyabulela kakhulu, isofthiwe iya kunye ne-GPS, kwaye ukuba uyayenza, mbulela ukuphawula kwakho, kunceda kakhulu
Ifayile ye-.map inokudalwa kunye nenkqubo ye-Mobile Mapper Office. Unokuyikhuphela kwiphepha le-Ashtech
sawubona, ndinombuzo, kufuneka ukulayisha esiqwini zibize kwi Mapper 100 mobile, kodwa iinketho ezimbini exelela ngam .dxfo .map, DXF akusebenzi ngenxa loqwalaselo kumda wesangqa yayo kwaye oko bakhangele iimpawu ingongoma, ngokukodwa igama, ulayishe nje amanqaku, .map andizange ndifumane indlela yokuyivelisa. Enkosi ingqalelo yakho impendulo njengoko kuya kuba luncedo kakhulu ukwazi ukuba njani i ifayile zilungelelanise zejografi undibonisa lonke igama GPS screen, enkosi kakhulu
Akufanele ikunike iingxaki ngenxa yobukhulu, kuba ayiyofayile enkulu. Ayizukwenzeka ukuba i-georeferenced ingalunganga, zama ngomfanekiso omncinci ukuze uqinisekise.
G Hi!, Umbuzo, ndinazo i google umhlaba pro, yaye njengoko omaziyo uye ukugcina imifanekiso amabakala ahlukeneyo. Ndazama ukugcina umgangatho ophezulu, xa ndaya kwi iinketho MM6 ukongeza umfanekiso ongasemva yonke elungileyo, wabona bakhe bonke, kodwa xa georeferencie wanika iqhosha lika Kulungile ukubona emsebenzini 'Akukho nto !!! ayibonakali imifanekiso engemvelaphi, ngoko-ke nayiphi na idatha yeemifanekiso ngokobukhulu kunye nomgangatho? Ingxenye, yintoni enye imithombo endifumana ngayo iifoto?, Leyo yinxalenye ye-google yomhlaba.
Ukukhupha izinto ezinokwenzeka. Zama ngesixhobo sokude, jonga ukuba imida yezinye iipropati ilinganisa kangakanani kwiindawo ezahlukeneyo zemephu kwaye uthelekise nemephu kwi-AutoCAD.
Kungaba ngumbango othabatha ingcamango engalunganga kwaye yingako bajonge.
Ngaba ubona naziphi na iipateni zokuguqulwa okanye iimpawu zeempawu ezingabonakaliyo? Umzekelo, ukuba zineendidi ezininzi, ukuba bezikwinqanaba elahlukileyo, ukuba bezinohlobo oluthile lomgca owahlukileyo, njl.
Ndizama ukuthumela umsebenzi kumsebenzi we-maguellan u-3. creie ifayile AutoCAD DWG ukuba ukulayisha ifayile MobileMapper yaye ukuba zonke amaqashiso zeefama, kodwa xa kulayishwa ifayile Maguellan wam, poligos kukho inqwelomoya yam wabona kwaye abanye ucinge ukuba tuieran ezahlukeneyo ifomathi .. banokundinceda ndixelele ukuba yintoni isizathu sokuba oku kwenzeke kwifayile yam.
Molo Paul, ndicinga ukuba kuyavakala ukuba uye kumthengisi wasekhaya waseMagellan. Eyona nto incinci abafanele bayenze kukukunceda ekusebenziseni izixhobo, kuba into yekhampasi ibonakala kum iyimpazamo yomzi-mveliso.
Kuthiwani ngeefoto, zama ngeenkinobho zangaphandle.
paul peru uthi:
kutshanje Molo umhlobo wathenga MM6, kodwa ukubabalwa okukhulu, andikwazi uyenze le elctronica Brujula, nangona mna landela la manyathelo wakwazi ukuzalisa isangqa aluhlaza, min emva phantse 5 embalwe, ukulawula nje ukuzalisa ezinye iinxalenye kwaye ndifumana isaziso sokuba kwakungenakwenzeka ukulinganisa i-e-compass. Omnye umbuzo indlela uyakwazi ukuthatha iifoto njengoko ukunika umfanekiso attribute ukusa kwinqanaba, xa ndithe thatha imifanekiso kwicamera luvuliwe kodwa engashiyi mna naliphi na iqhosha apho ukuthatha umfanekiso.
Wilson N. uthi:
Sawubona bahlobo, ndinenkinga. Ndavula ifayile ye-shp njengoluhlu lokuqala, nangona indawo yesikhombisi esibonisa indawo yangoku ayihambelani neendawo zecala le-shp (i-0,5 km isetyenzisiwe) yintoni eyenzayo?
Amin V uthi:
Mhlawumbi umbuzo wam ulula, kodwa ndinyanzele iiveki kwaye ndingasebenzisa kuphela uncedo lwakhe lomnene.
Ndine-MobileMapper 6 eofisini, kwaye kufuneka sifumane ixabiso lesantya ngexesha lokutyelela. Njengoko ingazibizi ngokuzenzekelayo, senze isigqibo sokwenza ngokude kunye nexesha. Ngomgama, siphendulela iifayile ezigqwesileyo kwiqonga leMaphu yamaphulo. Kodwa xa ufumana ixesha, i-GPS iphinda iphindise ixesha lokuqala kwinqanaba ngalinye. Sesele sitshekishe i-intanethi, siqhagamshelane nomsasazisi, u-ashtec uncedo lobuchwepheshe kwaye sifunde iincwadi zezikhulu ngamanqaku ngaphandle kweziphumo. Ndiyathanda ukuba inokusinceda siqwalasele izixhobo ngendlela echaza ngethuba lephuzu ngalinye liphakamisa ngexesha lokuhamba ngomgca. Ndiyabonga
Disemba, 2010 kwi
Bhota, ndoba ndingophathiswe Mapper 6 mobile, awawuthengayo kunyaka ophelileyo, uya ufake i gocr kodwa cd elafikayo elahlekileyo, ngoku yintoni eyenzekayo kukuba kuba kuyimfuneko ukuba ufake mapping mobile, kodwa ukufumana kuphela 1.44 version kanye GPS akamkeli mna, ngenxa yokuba wasetyenziswa ukuba 2.0, uyazi apho uya kufumanisa ukuba inguqulelo yemephu mobile?
Ndiza kukuxabisa kakhulu uncedo kwaye ndiyakuvuyisana nani ngolu hlobo olukhangayo.
Ukufumana ezinye iinkcukacha, khuphela i-pdf ngeenkcukacha:
Ubungakanani besikrini ngu-2.7 ″ (kwikona ukuya kwikona)
Isisombululo se-QVGA yi-240 x 320 pixels
UFrancisco Vázquez uthi:
Ndingathanda ukwazi isisombululo seskrini ukuthelekisa nezinye izixhobo
PABLO PINTO uthi:
Ukusuka eColombia, ukubingelela, abazange badibanise namakhodi .. unokundinceda ngothintana ???
UWilson Wilson, i-MM6 isebenzisa imephu efana neyimilo, njengaleyo esebenzisa iArcView.
Hey Pablo, ndithumele i-imeyile kummeli kaMagellan onokukuya kuwe, ndiyathemba kusasa ukuba wenza ntoni.
Ndifuna ukuqhagamshelana nomsebenzisi we-magellan mobilemapper 6
Ndifuna ukuqhagamshelana nomsebenzisi we-magellan imephu ye-6 ifowuni ukuba kunokwenzeka iphondo le-cádiz
UPablo Pinto uthi:
Siyabonga, Ing. Ndifuna ukufumana ikhowudi yeposi kunye nemephu YEMM6 ukuze ukwazi ukuthatha idatha kwintsimi. Ngaba unakho ukukhokela apho ndifumana khona? Ndikho eColombia.
Ing. Ndiye eColombia, ndiyabonga ngokukhokela kwakho
wilson nivelo uthi:
Sawubona bafana, ukuba unako ukundixelela apho ndingenza khona imephu ye-equator ukuba isebenzise kwi-MM6.
Kwaye, ukweliphi ilizwe? ukufumanisa ukuba ngubani omawuqhagamshelane naye.
Siyabonga, Ing. Ndifuna ukuthenga ikhowudi yeposi kunye nemephu ukuze ukwazi ukuthatha idatha endle. Ngaba unakho ukukhokela apho ungathenga khona? kunye nexabiso elifanelekileyo? MM6
Siyabonga, Ing. Ndifuna ukuthenga ikhowudi yeposi kunye nemephu ukuze ukwazi ukuthatha idatha endle. Ngaba unakho ukukhokela apho ungathenga khona? kunye nexabiso elifanelekileyo?
Njengoko ndiyazi, elo qela alixhasi iWindows mobile.
Enrique Altamirano uthi:
Egeomates Sir Dear, mna promark ezimbini 3 Windows CE, ndandifuna ukuba zifake ArcPad kodwa ma iye ayinakwenzeka, mna bacinga ukuba inkqubo perativo, ngaba unako ukutshintsha indlela yokusebenza, umzekelo ukuya windows mobile.
I-CE ayikhuthazwa ngeli nqanaba, kuba yikhompyutheni endala kakhulu, ndiyaqonda ukuba isasebenza kwi-Windows CE. Ityala leMM6 lukhetho olungcono kuba sele lusebenza kwiWindows 6, kwaye iingxaki ezininzi ezinikwe ngaphambili aziviwa.
Ngoku, ukuba ufuna ukusebenzisa ezimbini, iiMM6 ezimbini aziyi kusebenza kuwe, kuba elo qela alinakuba sisiseko, kuphela i-rover. Ukuba ufuna ukusebenzisa enye njengesiseko, kuya kufuneka usebenzise iMobileMapper Pro, iPromark3 okanye iMobile Mapper 100.
Ngokubhekiselele ekusebenziseni enye kunye nokwenza izilungiso ngedatha yeRinex, ungalindeli ukuchaneka okukhulu. I-MM6, kunye nedatha evela kwiqela lePromark3 elisebenza kwindawo efanayo yomsebenzi, inika ukuchaneka kwe-radial malunga ne-1.30 yeemitha. Ngoko ukuchaneka ngesiseko esisondeleyo kuya kuba phezulu kunoko.
Ukubingelela ngokubhaliweyo, izimvo ezigqwesileyo zibonelela ngokufanelekileyo.
Ndihlala eColombia kwaye ndinomdla wokufumana i-GPS yomsebenzi wokuhlola, ukhetho luyi-Mobile mapper ce okanye i-MM6, umbuzo umi ngolu hlobo lulandelayo, ngenxa yomsebenzi we-post-processing kufuneka amaqela amabini, elinye njengesiseko kunye nelinye njenge iselula okanye ndingathenga kuphela enye nge-eriyali ye-Beacon kwaye ndicele iifayile ze-rinex kwisiseko esikufutshane, ukuba kunjalo, ingaba yintoni umgama omkhulu wokusebenza ukusuka kwisiseko. Enkosi ngoncedo lwakho, qhubeka njalo.
IJapan Espinoza uthi:
Bhotani, kuqala ndiyabulela kuwe kuba ngokudala le blog ngoba kuye kwaba luncedo kakhulu, ndoba ndingophathiswe MM6, ingxaki yokuqala endinalo ukuba kuvela kuphela ngomzobo mobile iinketho ezimbini kwi menu, ukubhaliswa kunye neeyunithi i DGPS aziveli nabo ezilandelayo njengoko data ekrwada njl, ndingathanda ukwazi ak le ngxaki nokulungelelanisa ngenxa khompyutha kodwa andazi ukuqwalasela indlela MM6 ukudibanisa kwi Internet, ndoba ndingophathiswe modem zeselula engenazingcingo okanye iselula, Bendiya aqonde ukuba umbonga indlela ukwenza le misebenzi ekubeni injineli yoluntu kwaye kufuneka benze uphando umhlaba kwaye ndingathanda ukunqumla ezisezintabeni nale divayisi, iintsikelelo
Hugo Yair uthi:
Mnu. Geofumadas, ukubulisa okulungileyo, ndikubhalela kuwe ukusuka eColombia.
Ndine-GPS ye-GPS magellan maper 6 kwaye ndinenkinga yokuyiqwalasela ngendlela endivumela ukuba ndisebenze kwizicwangciso ezicwangcisiweyo okanye ezixandekileyo. Ndilandele imiyalelo kodwa ninganikeli nto efunekayo eColombia. Ndiya kuxabisa gqitha ukuba unokunceda kum. Okwangoku andizange ndibe neengxaki ekusebenziseni ukulungelelaniswa kweendawo okanye ngokuqhubekayo. kodwa kukho amaxesha apho kufuneka ndisebenze kunye nezicwangciso zokucwangcisa. KUTHANDA
Ngamaqela amabini ahlukeneyo. I-Triton sisikhangeli kuphela, ayizi neWindows mobile, ke ayixhasi iArcpad.
Amanqaku akhe aya kumitha emithathu, kanti i-mm6 isekela i-postproceso ithatha ngokuchanekileyo kufuphi okanye ngaphantsi kweemitha.
U-Israyeli uRomero Martinez uthi:
Nguwuphi uhluko wendlela kunye neenkcukacha ezikhoyo phakathi kwe-6 mapper ephathekayo kunye ne-2000 triton, isofthiwe ye-8 pad pad ingafakwa kwiikhompyutha zombini
Kulungile, uzame ukuyilanda kwiphepha le-Ashtech
Ndizisola kwaye ndifake i-ActiveSync, kodwa kwi disk andinakufumana i-MobileMapping.
Ngaba unokuchaza into enokuyenza? Ndifuna ukuyisebenzisa ensimini
Sawubona, kwibhokisi iza disk, kufuneka ufake i-ActiveSync, uze uxhume ifowuni kwi-PC, kwaye oko kuthetha ukufaka iMobielMapping ezayo kwi disk.
Kwakhona kwibhokisi ifika uxwebhu olunemimiselo yesiqinisekiso kunye nekhowudi yokusebenza yenkqubo yokugqibela.
Ukuba wakho umhlobo uthenge idivaysi kwisitolo, entsha, yonke into ifanele ifike.
Ndiyazi ezinye iinguqulelo eziza kuphela kwinkqubo yesiNgesi.
Ukubulisa, ukusuka eColombia. Ndinengxaki enkulu, Ndizuze MobileMapper 6, ngenxa umhlobo kwi US, kuqala kufika IsiNgesi indlela yokusebenza, ikhowudi postprocessing, akukho mbono kunye phezulu kuyo babone isicelo Mapping Mobile.
Ngaba unakho ukukhokela kum? Ndifuna ukuyidlulisela kwisiSpanish kwaye ndinokwazi ukubamba idatha endle. Ndisoloko ndisebenza ne-MobileMapper Pro kwaye ihluke kakhulu.
Akufanele kube yingxaki.
Ingxaki ayikukhupheli idatha. Ingxaki ivela xa ndiqala imephu eshukumayo ukubhalisa izinto ezintsha kwimephu yoluhlu ... akunakwenzeka ukwenza njalo kuba iGPS ayiboneleli ngolwazi kwiscreen. Ngaba ucinga ukuba kunokwenzeka ngenxa yokuba ixhunyiwe kwi-PC? Ngaba kunokwenzeka ukuthatha idatha yeGPS edityaniswe kwiPC?
Andazi, iya kuba yingxaki ethile yezibuko. Unokukhuphela idatha ngokususa imemori ye-SD
I-USB. Ukuba ufaka i-ActiveSync ... kwaye iyasebenza (kuba ngaloo ndlela faka isoftware kwi-GPS).
Kwaye uqhagamshela njani isixhobo? I-USB? Ngaba uyifakile iActiveSync?
Umhlobo olungileyo… emva kokufaka imephu ephathwayo kunye nemephu ephathwayo namhlanje (ezi zimbini kwiGPS) kunye neofisi ye-mapper ephathwayo 6 (kwiPC), ndilandele indlela yakho. Nangona kunjalo, xa uqala imephu yeselula, umyalezo olandelayo uvela: "Ayikwazi ukuxhuma kwi-GPS". Ithetha ukuthini kwaye ndiyisombulula njani ingxaki kuba andikwazanga ukuthatha idatha.
Ndiyayixabisa uncedo lwakho lomnene kwaye ndiyavuyisana nomsebenzi wakho.
Ewe, shiya ukungathandabuzi kwakho apha, ukubona ukuba sinokukunceda njani
Ing. Pablo uthi:
Ndiyakuxabisa ukujoyina le ndawo kuba ndisanda kuthenga i-magellan ye-mapper ye-6 gps emva kokusebenza kwaye ndinokuthandabuza okuninzi malunga nokusetyenziswa kwayo i-abradesco ungandinceda enkosi
mario roberto argeñal uthi:
Isibingelelo esivela kwi-Honduras, ngenxa yenkqubo ekhethekileyo echaphazelekayo imihla ngemihla ukuphucula ubuhlobo, isifundo sesayensi, umsebenzi.
Iintsikelelo ezisuka phezulu ukuya kuzo zonke
Iipropati zefayili ye .map zinenkqubo efanayo neefayile ezimileyo ozilayishayo?
Ngaba uqulethe .prj?
Ngokwesiqhelo isixokelelwano sithatha: iifayili ezintathu zeefayile zemilo: .shp, .dbf, .shx kananjalo .prj equlathe uqikelelo. Emva koko i.drw endingakhumbuli ukuba yeyantoni.
Gustavo Garcia uthi:
Molweni...ndifuna ukuvula ezinye zee-SHP ezisuka kwindawo eyahlukileyo yejografi kunale ndikuyo...xa ndilandela inkqubo indithumelela umyalezo othi “A layer cannot be added. Inkqubo yolungelelwaniso lomaleko ayihambelani nokhetho lwemephu olusebenzayo. Nangona kunjalo, OKUQINISEKILEYO ndikwinkqubo yolungelelaniso oluchanekileyo kunye noqikelelo, ndiya kuluxabisa uncedo .. Ndiqala ukusebenzisa i-GPS kodwa phantse ndihlala ndisebenzisa i-ArcPad. Kubonakala kum ukuba oku kulula ... ANDAZI
Ukwazisa uAntonio, kukulungile ukuba ulwazi lukuncede.
Uphononongo uAntonio Pablo Rodriguez uthi:
Kuba uMnu Geofumadas akungathandabuzeki ukuba kufuneka sithinte iinqanawa zethu xa ufuna iinkcukacha zakho kunye nolunye ulwazi lophando oluncedo olukhulu kunye nomdla kubo bonke, ekubeni iphepha lakho lipheleleyo, ligcine ngendlela leyo kwaye uphucule.
Izintandokazi ezihloko zeGoogle Earth